Numbers in malaayiin
Numbers in malaayiin, balaayiin, trillions, crores, lakhs Converter
Numbers in malaayiin, balaayiin, trillions, crores, lakhs Converter waxaa loo isticmaalaa si loogu badalo tiro malaayiin, balaayiin, trillions, kun, lakhs iyo crores. Sidoo kale in aad ogaato sida badan oo eber in tiro kasta awood u yeelan doonaan.
Qolfo Tiro badan:
Qiyaasta Gaaban - weyn kasta oo cusub oo ka badan million waa mid ka mid kun jeer in ka badan muddo hore.
Qiyaasta Long - weyn kasta oo cusub oo ka badan million waa hal milyan oo jeer ka badan muddo hore.
qiyaasta gaaban qiyaasta dheer
Ku qor lambarka:
Magaca tiro badan:
Online matoor lambarka aan sugnay
Online matoor lambarka aan sugnay abuuraa tiro kadiska ah ee kala duwan oo la soo xulay.
Tobanle, binary, hexadecimal iyo hababka kale ee tirada diinta
Beddelaan tirada binary, jajab tobanle, octal, hexadecimal iyo hababka kale ee tirada.
Roman, Carabi, Hindi tiro Converter
Beddelaan tiro ee Roomaanka, Carabi iyo Hindi nidaamyada lambarada midba midka kale.
Hawlgallada on tirada iyo jajab, sida Intaa waxaa dheer, kala goynta, isku dhufashada, kala qeybinta, Culumida, cosine, tangen, logarithm, jibbaaranaha, awoodaha, danaha, halbeegga, degrees.